Mkpụrụ akwụkwọ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Mkpụrụ akwụkwọ
Igwe oru ugbo nke ndi na-eto eto peas n'ime ala
N'oge a ọ na-esiri ike ịchọta ibé ebe peas anaghị eto. Onye ọ bụla maara banyere uto na uru bara uru nke omenala a, ọ bụ ya mere ndị okenye na ụmụaka ji hụ ya n'anya nke ukwuu. Ozokwa, dika anu anu, o nwere nnukwu protein protein, nke di mfe karia. Ohia ohuru, green peas na-etinye vitamin B, PP, C, carotene, phosphorus, iron, na lysine.
Kedu ihe a ga-akụ na mba na June, họrọ osisi maka ịba n'ime ubi
Atụmatụ mba ndị dị ala enweghị ike ịnya isi maka ọnụnọ nke nnukwu ebe ị nwere ike ịdọrọ ihe niile mkpụrụ obi na-achọ. Ya mere, a ga-eji otu akwa ahụ mee ihe maka ịgha mkpụrụ dị iche iche kwa oge. В конце мая-в начале июня уже должно освободиться достаточно места после уборки ранних культур, и именно сейчас предстоит дилемма: оставить их пустующими или попробовать вырастить что-либо еще.
Otu esi akụ na ilekọta agwa n'ime ogige
N'oge na-adịbeghị anya, agwa aghọwo ihe na-ewuwanye ewu, dịka ọ bara ọgaranya na ọtụtụ vitamin na mineral. Site na protein nke akwukwo nri a di nma karia anu ohia. Nlekọta nke ihe ubi a na-eme ka ọ mara mma maka ịkọ ihe ubi na ala ubi na atụmatụ ndị a. Akwukwo nri agwa: ihe omuma nke ubi ubi.
Achịcha maka ahụ: ngwugwu, uru, contraindications
Ejikpọ bụ otu n'ime osisi ndị ochie oge ochie, bụ nke a zụlitere kemgbe ọtụtụ puku afọ. Taa, a na-eji ihe oriri dị iri 20 eme ihe na nri, uru nke onye nke ọ bụla maka ahụ mmadụ bụ otu, na uto na ọdịdị nke mkpo dị iche. Achịcha bụ, nke mbụ, protein, ihe dị mkpa dị mkpa iji metabolism ma wusi usoro muscle.
Esi esi esi nri nke tomato na-eri oge oyi: otu nchịkọta dị mfe ma dị ụtọ
Taa, ọ bụghị otu uzommebe maka canning beans maka oyi a maara: ọ na-akpọre ya na ya dị ọcha ụdị, na tomato mado, na ụdị salads, na ma na-enweghị mmanya. N'uzo ndi a huru ugbua ma mara, anyi na-atukwasi aro itinye otu. Banyere uru nke billet Ntụziaka a ga-eme maka agwa na tomato ihendori maka oyi dị mma n'ihi na ị nwere ike iji billet emechaghị akwụkwọ.
Otu esi akpo uzo uzo ndu n'ulo
Gourmets ndị dị ugbu a bụ kechioma: nhọrọ nke ngwaahịa, ya mere, efere ndị a ga-esi esi ya, bụ nnukwu. Otú ọ dị, ha agaghị efunahụ mkpa ha na ụlọ ha na-emebu site na akwụkwọ nri ndị a kụrụ n'ubi. Nke a na-emetụtakwa mkpo ọkụ, nke, ma ọ bụrụ na edozi ya n'ụzọ ziri ezi, nwere ike ịbụ ihe ntinye na-agbakwunye ọtụtụ ntụziaka.
Red clover: bara uru Njirimara na seeding na saịtị
E nwere ọtụtụ ụdị clover. Ma maka ebumnuche ahụike na ntụziaka nke ọgwụgwọ ọdịnala, a na-ejikarị mgbatị na-acha uhie uhie mee ihe, na ndabere ya, a na-emepụta nkwadebe ọgwụ na ụlọopathic. Atụmatụ nke iji na ịkụ osisi ga-atụle n'isiokwu. Nkọwa botanical A maara osisi a nke ọma dị ka onye na-acha uhie uhie, aha ya na Latin bụ Trifolium prathennse.
Esi esi na-amị mkpụrụ osisi soybean n'ụlọ na otú o si bara uru
Ndị na-akwado nri dị mma na-ejikarị edochi nri anụmanụ na akwukwo nri. Otú ọ dị, n'ọnọdụ a, ọtụtụ ndị na-eche nsogbu nke nkwụnye ụgwọ nke ndị na-edozi na uru ndị ọzọ bara uru na ahụ. Ruo ugbu a, e nweelarị ọtụtụ ngwaahịa nke sitere na osisi, nke nwere ike dochie protein anụmanụ maka ndị na-adịghị eji ya maka ihe ọ bụla.
Eziokwu ahụ bụ na ndị mmadụ na-akpọ ọkpụkpụ na aha iri na asaa ndị ọzọ na-egosi àgwà mmadụ na-enweghị mmasị na ahịhịa a, mmasị ya na nkwanye ùgwù maka ọdịdị dị iche iche bara uru. Na n'ezie, osisi nke kpamkpam, dịka ha na-ekwu, site na kọntaktị na mgbọrọgwụ, nwere ike ịbara ndị mmadụ uru, ọ gaghị abara ha uru ka ha nụkwuo anya.
Esi mechie agwa maka oyi n'oge obibi
Achịcha bụ onye na-adọrọ mmasị ma dị ezigbo mkpa na tebụl anyị. Eri sie, ghee, mkpọ. N'ịbụ isi iyi nke ọtụtụ ihe bara uru, ọ na-aghọ otu n'ime ngwaahịa ndị dị na nri. Tụlee otú e si akwadebe agwa maka oge oyi na ọtụtụ ụzọ. Uru nke agwa A pụrụ iche nke vitamin na ihe ndị na-egosi mkpa maka nchịkwa nke nri anyị.
Senna Alexandria, ma ọ bụ Alexandria akwụkwọ: nkọwa na njirimara osisi
A na-amarakwa akwụkwọ Alexandria n'okpuru aha Afrika Cassia, Holm Cassia, Senna Egypt. A na-eji osisi ahụ eme ihe na ndị mmadụ na ọgwụgwọ ọdịnala, n'ihi ya, ụfọdụ mba na-etinye aka na ya na-arụ ọrụ dịka ihe eji agwọ ọgwụ. Nkọwa botanical Anyị nwere shrub n'ihu anyị, bụ ndị ezinụlọ legume.
Chinas mmiri ma ọ bụ sachevichik - osisi a na-ahụkarị, nwere ihe pụrụ iche. Mgbe e jiri ya mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, ọkwá ahụ na-aghọ nsị, ma jiri ezi uche mee ihe maka nkwadebe na ojiji nke sirinji, ọ na-aghọ ọgwụ nke nwere ike ịzọpụta gị n'ọtụtụ nsogbu. Ka anyị kwuo banyere peculiarities nke osisi a na ntụziaka ya.
Nri anụ uhie: Ezi ntụziaka, usoro nri ngwa ngwa
Ihe niile dị mkpa nke anụ ahụ - protein protein nri, abụba na-enweghị cholesterol na ọgaranya vitamin-mineral - na-agbakọta na-acha uhie uhie agwa. N'eziokwu, naanị ihe mkpofu nwere ike dochie ihe dị iche iche nke ngwaahịa ndị ọzọ. Ka anyị mụtakwuo banyere mmetụta dị n'ahụ anụ uhie na otú e si akwadebe ya.